Internet မလိုဘဲ စာပို့လို့ရတဲ့ Bridgefy App ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ ? — Anycall Mobile
By Naw Htoo Aung February 2, 20212Mins Read
ဒီနေ့မှာတော့ လတ်တလောခေတ်စားနေတဲ့ Bridgefy Application လေးကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမလဲ? ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ဒီ Application လေးက Internet Connection မရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Bluetooth Antana ကို အသုံးပြုပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စာပို့ပြီးဆက်သွယ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Application လေးကိုတော့ internet connection မရတဲ့ ကျေးလက်နေပြည်သူတွေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတွေ၊ အားကစားကွင်းထဲရောက်တဲ့အခါတွေ၊ ဂီတပွဲတော်တွေ သွားရောက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်သွယ်ဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒီ Application ထဲမှာပါတဲ့ Function လေး သုံးခုအကြောင်းကို အနည်းငယ်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ Private Mode ပါ။ ဒီ Mode မှာတော့ လူအများနဲ့ မဟုတ်ဘဲ နှစ်ယောက်တည်း စာပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စာပို့လို့ရတဲ့ အကွာအဝေးကတော့ မီတာ ၁၀၀ (ပေ ၃၃၀) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယကတော့ Mesh Mode ပါ။ ဒီ Mode လေးကတော့ မီတာ ၁၀၀ (ပေ ၃၃၀) ထက်ကျော်တဲ့အကွာ အဝေးဆို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒီ Mesh Mode လေး အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ မီတာ ၁၀၀ (ပေ ၃၃၀) အလယ်မှာ ကြားခံအနေနဲ့ အသုံးပြုနေတဲ့ Bridgefy User တစ်ယောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေ ချိတ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အကွာအဝေးက အကန့်အသတ်မရှိပဲ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်စာပို့ချင်တဲ့သူက ဝေးနေရင်တောင် Private Mode ကနေ ပို့မယ်ဆို ကြားမှာရှိတဲ့ Bridgefy User တွေ ဖတ်လို့ရမှာကိုလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Broadcast Mode ပါ။ ဒီ Mode ထဲကနေ စာပို့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အနီးအနား Bridgefy App အသုံးပြုနေတဲ့သူတိုင်းဆီကို ရောက်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Android ဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ ပထမဆုံး Play Store မှာ Bridgefy ဆိုပြီး ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Open ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ နာမည်လေးတစ်ခုပေးပြီး “Complete Setup” ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီ Application လေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Location နဲ့ Bluetooth ကိုဖွင့်ပေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Next ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Location အသုံးပြုခွင့်တောင်းရင်တော့ “Allow while only using the app” ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Application ထဲမှာတော့ Broadcast Mode နဲ့ Private ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Start Broadcast Mode ကို နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ Bridgefy App သုံးနေတဲ့သူတိုင်းဆီ စာပို့လို့ရသွားပါပြီ။
ပြီးရင်တော့ Got it ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ လူတိုင်းဆီ မပို့ချင်ဘူး တစ်ယောက်ချင်းပဲ ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Private Message အနေနဲ့ ပို့လို့ရပါတယ်။ Private အနေနဲ့ ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စောစောက စာပို့ထားတဲ့ Broadcast Mode ထဲ ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Profile လေးကို ဖိထားပေးလိုက်ပါ။ “Send Private Message” ပေါ်လာရင် ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ပို့ချင်တဲ့ စာတွေပို့လို့ရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ် Private အနေနဲ့ ပို့ထားတဲ့ List ကိုတော့ အလယ်က Private Mode ထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ internet connection မရလည်း စာပို့လို့ အဆင်ပြေကြပါစေ။